SINO-OCEAN MARINE waxay bixin kartaa qalabka dayactirka kuleylka sida: bamka saliida, mootada maxon, biiyaha kululeeyaha, koronto, isha ololka, waalka, qalabka, qalabka kalida, qalabka wax lagu xiro iyo qalabka kale ee dayactirka.
Si loo daboolo baahiyaha macaamiisha, Sino-ocean Marine waxay keyd u tahay qaybo badan oo kuleyliyaha kuleylka ah. Qaybaha dayactirka oo leh qaybo dhab ah oo tayo leh iyo shahaado ayaa mudan in lagu kalsoonaan karo!
Liiska Waxsoosaarka Gubashada:
MAGAC & KU HABOON NOOCA
Qiimeynta: 1064-3170KW Saxaafadda (MIN / MAX): 25 BAR / 30 Saliid Baar (MIN / MAX): 95kg / h / 283kg / h IP44 220V 60HZ 2012
Saliida Awoodda: 34-121kg / h Tayada saliida: Max 600 cSt + 50 ℃ 220V 1 * 60Hz 6A 440V 3 * 60Hz 10.9kW IP44 2012
Liiska Kaydka Heerka Biyaha:
CAAFIMAADKA HEERKA BIYAHA
NOOCA XIRIIRKA / QIIMEYNTA: SPDT / 250VAC, 5A MAX.PRESS./TEMP: 16kg / cm2 250 ℃ DHULKA: IP56
Liistada Waxsoosaarka Kuleylka
KU HABOON NOOCA
WAXYAABAHA: PP / FPM MAX: 2.3L / H BEI: 8BAR MAX: 1.9L / H BEI: 16BAR IP: 65 AC: 110-240V 50 / 60HZ 21W 28237 BREMEN GERMANY P / N: 10211074 S / N: 102M0006153 OO LAGU SAMEEYAY JARMALKA 2/2015
MGO SUPPLY BOMP
AUX. BIILER FO Bamka
MS711-4 （NOOCA GAADIID）
T0710403 T NOOCA MOOTO）
MS712-4 Y NOOCA GAADIID）
QAABKA BIYAHA BIYAHA
QHD SINO-OCEAN MARINE kayd dhawr qaybood oo dhab ah qaybo cusub oo BILAASH AH, oo dhammaantood ay soo saaraan soo saarayaasha caanka ah ee adduunka, laguna caddeeyo kormeerka markabka.
Wixii ku saabsan BARNAAMIJYADA QAYBAHA, waxaan ku soo bandhigi karnaa qalab soo socda oo keyd ah. Qalabka leh qaybo dhab ah oo tayo leh & shahaado ayaa mudan in lagu kalsoonaan karo！
Hore: Warshad daaweynta bullaacad
Xiga: Saxanka kuleylka